XOG MUHIIM AH: Madaxda DF Soomaaliya, Madaxda PL & Isimadda dhaqanka oo leh kulan siyaasadeedkii ugu adkaa iyo qodobada laga hadli doono? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL XOG MUHIIM AH: Madaxda DF Soomaaliya, Madaxda PL & Isimadda dhaqanka oo leh kulan siyaasadeedkii ugu adkaa iyo qodobada laga hadli doono? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha XOG MUHIIM AH: Madaxda DF Soomaaliya, Madaxda PL & Isimadda dhaqanka oo leh kulan siyaasadeedkii ugu adkaa iyo qodobada laga hadli doono?
XOG MUHIIM AH: Madaxda DF Soomaaliya, Madaxda PL & Isimadda dhaqanka oo leh kulan siyaasadeedkii ugu adkaa iyo qodobada laga hadli doono?
MUQDISHO(P-TIMES)- Puntlandtimes oo shabakad warbaahineed oo madax banaan ayaa ogaatay in kulankii ugu adkaa ee dhanka Siyaasadda ah uu caawa dhexmarayo Madaxweynaha dawladda Faderaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Puntland oo ay ku wehliyaan Wasiiradda labada dhinac ee dawladda dhexe iyo kuwa Puntland, Isimada dhaqanka.
Kulankan waa kii ugu horeeyey ee noociisa ah waxaana diirada la saarayaa Arrimaha xasaasiga ah ee ay Puntland ka doonayso dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, gaar ahaana waxaa maalmihii u dambeeyey la diyaarinayey waxyaabaha ay tahay in lagala hadlo Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lafilayaa in ay Puntland hor dhigto qodobo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadeed oo ay ku adag tahay sidii meelmar ay ku noqon lahaayeen.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in Puntland ay diyaarisay Ajendayaal ay ka mid yihiin kuwa saameyn ku leh geedi-socodka siyaasadeed ee dalka, ayna ka mid yihiin.
1- In Deeqaha caalamiga ah ee dhinacyada Ammaanka, Kaabayaasha dhaqaalaha, Adeegyada bulshada iyo Waxbarashaduba ay noqdaan kuwa qeybintooda lagu jaan-gooyo baahida iyo sidda loo kala gobalo badan yahay oo aan isku si’i loogu qeybin gobalo aan waxba nidaam ah kahana qaadin.
2- In xiisada la xariirta Arrimaha Khaliijka ay noqdaan kuwa mawqifkooda dib loo eego ,iyadoo diiradda la saarayo arrimaha muhiimka ah ee ay ka hayaan mandiqada Puntland, gaar ahaana dhaqaalaha Ummadda Soomaaliyeed oo yaala gudaha dalka.
3- In dekedaha iyo garoomada Puntland ay helaan xaquuq gaar ah oo ay uga helayaan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana si gaar ah diirada loo saaray qadiyadda la xariirta Dekeda magaalada Boosaaso.
4- In mawqif mideysan laga qaato daruuraha iyo dufaanada Siyaasadeed ee garaacaya Madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaana ku wajahan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi oo ay wadaan siyaasiinta Soomaalida qaarkood oo u baabulan qaab beeleed.
Xogaha shirkan oo kooban ayay wararku sheegayaan, in caawa dhici doono, waxaana qodobadaas ay noqonayaan gundhiga oo ay ku jiraan arrimaha hoose ee ay dhinacyadu si adag uga wada hadlayaan.
pure boost on DAAWO:Madaxweynaha cusub ee Puntland oo la kulmay wafti ka socday dowladda federaalka Soomaaliya
jordan retro 12 on FAALLO: Gaas Puntland maaha, Puntland-na Gaas maaha.
gucci belts on DHAGAYSO:Cali Dheere & Al-shabaab oo shacabka Gaalkacyo war naxdin galiyey u sheegay kadib markii maanta….
progressive auto ins on Maraykanka oo ku dhawaaqay warkii ugu farxada badnaa ee ku aadan shacabka Soomaaliyeed & Dowladda Somalia oo…..
DenSmutt on Maraykanka oo ku dhawaaqay warkii ugu farxada badnaa ee ku aadan shacabka Soomaaliyeed & Dowladda Somalia oo…..